MGSE iyo desktop nyowani yakatsanangurwa neLinux Mint | Kubva kuLinux
MGSE iyo desktop nyowani yakatsanangurwa neLinux Mint
Pakupedzisira Clem (mugadziri weLinux Mint) yaratidza isu iro ramangwana redesktop richava reiyo inotevera vhezheni yekuparadzira kwakakurumbira.
Clem ha yakatumirwa pane iyo blog chinyorwa kwaanotsanangura kuti ramangwana re Linux mint uye kuti iyo desktop yaunoda kupa kune vashandisi ichave iri. Vanogona kuiverenga muchiSpanish pano, kunyangwe ini ndichivasiya pano kuti zvinyanye kugadzikana uye pakupedzisira ndinokusiira maonero angu nezvazvo 😀
Ndinoda kukumbira ruregerero kunharaunda, vezvenhau nevatori venhau vakatinyorera kuti tizive zvakawanda nezvekusunungurwa kwedu kuri kuuya. Isu tanga takavanzika zvakanyanya uye masvondo matatu mushure mekuburitswa kweUbuntu hazvisati zvanyatso kujeka kuvanhu vazhinji chaizvo kuti inotevera Linux Mint ichaita sei. Chikonzero isu takanyarara kudaro nekuti ini handidi kuvimbisa chimwe chinhu chandisingakwanise kuvimbisa. Nhasi isu tave takagadzirira kukupa iwe yakadzama preview yeLinux Mint 3, yakanyorwa zita "Lisa." Ndinovimba unonakirwa nazvo uye ndinotarisira mhinduro dzako nemazano ako.
1 Gnome 2 vs itsva desktops
2 Gnome 3 uye MGSE
3 Mamiriro ekuchengetedza
5 Zvitsva zvekutsvaga
7 Mhinduro uye maitiro
8 Maonero angu
Gnome 2 vs itsva desktops
MuLinux Mint 11 sarudzo yakaitwa yekuchengetedza Gnome 2.32. Iyo yechinyakare Gnome desktop, kunyange isina kunyatso kuvandudzwa neboka reGnome rekuvandudza, ichiri nekure desktop inonyanya kufarirwa mukati memunharaunda yeLinux. Sekumwe kugoverwa kwave kutora madhairekisheni matsva senge Kubatana uye Gnome 3, vashandisi vazhinji vanonzwa vasina hanya uye nekudaro vakatamira kuLinux Mint. Paive ne40% kuwedzera mumwedzi mumwe uye isu tave kukurumidza kusvika Ubuntu # # mumusika weLinux desktop.
Zvizhinji sezvatingade kuchengeta Gnome 2.32 kwenguva yakati rebei, isu tinofanirwa kutarisa kumberi uye kukumbundira matekinoroji matsva. Izvi hazvireve kuti isu tinofanirwa kushandura mashandisiro atinoita matafura, zvinoreva kuti tinofanira kuedza nepatinogona napo kuti vanhu vanzwe vari pamba, asi pamusoro penheyo itsva, rukoko rutsva rwetekinoroji. inotsigirwa uye inogona kuchengetwa mune yakanaka chimiro mune ramangwana.
Kubva pane yekuona tekinoroji, Gnome 3 inonakidza desktop, uye iri kuita zvirinani neshanduro yega yega. Zvinotora nguva yeLinux Mint kugadzira desktop mukati gnome 3 zvakafanana nezvataive nazvo gnome 2asi nekufamba kwenguva tichakwanisa kuita zvakawanda kupfuura zvaikwanisika nedesktop desktop.
Uine izvi mupfungwa, ramangwana reLinux Mint ndiGnome 3, iyo iripo yeLinux Mint mubvunzo uri nyore: "Tingaita sei kuti vanhu vakaita seGnome 3? Uye chii chatinopa seimwe nzira kune avo vachiri kuda kuchinja? «.
Gnome 3 uye MGSE
Gnome 3 inopenya, inoyevedza, uye yemazuva ano. Iri tafura yakashongedzwa, asi inouya nenyaya shomanana:
Nzira iyo iwe yaunowana nayo komputa yako inoshandurwa
Iko kunoshanda-centric, kwete basa-centric (switching between apps, not windows)
Izvo hazviite multitask zvakadaro (haugone kuona yakavhurika windows, systray icons, nezvimwewo)
Isu tanga tichishandisa mamenu ekushandisa, hwindo zvinyorwa, uye mamwe echinyakare desktop maficha andinogona kurangarira Zvaitaridzika zvakasiyana mu KDE, Xfce, kana kunyangwe Windows uye Mac OS, asi zvaive zvakafanana. Gnome 3 iri kuchinja zvese izvo uye iri kugadzira nzira irinani yekuti tibatane nekombuta yedu. Kubva pakuona kwedu pano paLinux Mint, isu hatina chokwadi chekuti vakarurama, uye hatina chokwadi chekuti vakanganisa kana kwete. Izvo isu tine chokwadi nezvazvo ndezvekuti vanhu havana kupihwa sarudzo yekushungurudzika uye chiono chedu chekushandisa ndechekuti komputa inofanira kukushandira uye kuti unzwe kugadzikana. Saka uine izvi mupfungwa, Gnome 3 paLinux Mint 12 inoda kukubvumidza kushamwaridzana nekombuta yako munzira mbiri dzakasiyana: yetsika nzira, uye nzira nyowani, uye zviri kwauri kuti usarudze nzira yaunoda kushandisa.
Kuti tiite izvi takagadzira "MGSE" (Linux Mint Gnome Shell Extensions), inova desktop desktop pamusoro peGnome 3, zvinoita kuti zvikwanise kushandisa Gnome 3 nenzira yechinyakare. Unogona kudzima zvese zvinoumba mukati meMGSE kuti utore yakachena Gnome 3, kana iwe unogona kuisiya kuti utore Gnome 3 desktop yakafanana neyawave uchishandisa kare. Ehe, iwe unogona zvakare kusarudza uye chete kubvumira izvo zvinhu zvaunoda kugadzira yako pachako desktop.
Iwo makuru maficha eMGSE anotevera:
Iyo yekushandisa menyu
Chinyorwa che windows
A desktop-centric workstation (i.e. chinja pakati windows, kwete zvinoshandiswa)
Zviratidzo zveSystem tray zvinoonekwa
MGSE zvakare inosanganisira yekuwedzera ekuwedzera, senge midhiya mutambi chiratidzo, uye zvakasiyana siyana zvinowedzera zveGnome 3.
Izvi ndizvo zvazvinoita (tinya pamufananidzo kuti uwedzere icho):
Sezvauri kuona iwo musanganiswa wekare uye mutsva. Iyo desktop nyowani nyowani, asi iine echinyakare zvinhu. Isu tinofara kwazvo nezve tekinoroji nyowani, asi zvakakosha kuti munhu wese anzwe ari pamba. Saka Linux Mint desktop inotarisa uye inoita seLinux Mint desktop uye izvi zvinonzwa zvakangofanana neGnome 3 uye echinyakare Linux Mint desktops yakauya pamberi payo. Unogona kumhanyisa maapplication kubva kumusoro kuruboshwe, chinja nyore pakati pemapurogiramu uye nzvimbo dzekushandira nerunyorwa rwemawindows kana mapfupi ekhibhodi, chengeta ziso rako kumusoro, uye uwane Gnome 3 maficha se "zviitiko" mukona yekumusoro kuruboshwe.
Gnome 3 inoda vhidhiyo yekumhanyisa uye icho chinhu chinowanikwa nemaitiro mazhinji. MuLinux Mint 12 isu takave nechokwadi zvakare kuti iwe unogona kumhanya Gnome 3 mukati meVirtualbox, saka kana 3D kumhanyisa kuchigoneswa pane yako chaiyo muchina, iwe unofanirwa kukwanisa kunakidzwa neGnome 3 uye MGSE pasina mamwe madhiraivha
Kana iwe usina rombo rakanaka, zvakadaro, iwe unozogara mu "FallBack modhi".
Usaite chikanganiso nezve "FallBack modhi", kunyangwe ichitaridzika, haina chekuita neGnome 2! Icho chikamu cheGnome 3 uye inoenderana zvizere nematekinoroji akadai seBonobo mapaneru maapplet. Yakave ichidaidzwa nenzira kwayo se "inodonhedza modhi", uye yakagadzirirwa kudzikira nekufamba kwenguva sezvo Gnome 3 ichawedzera kuwanda kuenderana kwehardware.
MATE forogo yeGnome 2.32, inotaridzika uye inoita chaizvo seGnome 2.
Dambudziko neGnome 2.32 nderekuti rinopesana neGnome 3. Inogadzira matambudziko mazhinji mukati mezvakachengetedzwa uye hazvingagone kuti vashandisi vamhanye zvese Gnome 2 uye 3. MATE kune rimwe divi inofanirwa kunge ichienderana naye . Iwe unogona kuve uine ese maviri MATE neGnome 3 akaiswa pakombuta yako uye nekugona kuchinjika pakati pedesktop pane yekunyorera skrini.
Mukuita, MATE chirongwa chitsva chose uye chinopesana neGnome 3 munzvimbo zhinji. Parizvino tiri kushanda nesimba takabatana nevagadziri veMATE kuti tione nekugadzirisa makakatanwa aya, kuti tikwanise kuve neGnome 3 neMATE yakaiswa nekusarudzika paLinux Mint 12 DVD edition.
Rimwe dambudziko neMATE nderekuti, kuti iwirirane neGnome (3), yaifanira kuzvitumidza zita rayo pachayo, uye semhedzisiro, mashandisiro uye madingindira akagadzirirwa Gnome 2 anoda kutamisirwa kuMATE kuti aenderane nayo .
Gnome kukakavara uye kunyorera uye theme kutama kuri nyore kugadzirisa. Saka kana MATE akaita LiveDVD yedu, zvingangouya nemimwe micheto yakaoma, asi nemhinduro yako tinokwanisa kugadzirisa nyaya nekukurumidza.
Mune ramangwana, iwe unenge usiri kushandisa yetsika yekutsvaga injini. Linux Mint ndiyo yechina inonyanya kufarirwa desktop desktop system munyika, nemamirioni evashandisi, uye inogona kupfuura Ubuntu gore rino. Linux Mint inogadzira mari yayo kana vashandisi vachiona uye wobaya pamashambadziro mukati mekutsvaga injini, uye yakakosha. Kusvika pakuenda kwemari inonangidzirwa kwakanangana nemajini ekutsvaga uye mabhurawuza. Chinangwa chedu ndechekupa vashandisi ruzivo rwakanaka rwekutsvaga tichizvigamuchira isu kumari iyo yatinogamuchira chikamu chemari iyi. Majini ekutsvaga asingagovane mushandisi akawanikwa mari anobviswa kubva kuLinux Mint, uye iwe unogona kuita kuti kushambadzira kwako kudzivirwe
MuLinux Mint 12 uye zvirikuuya zvinoburitswa tinotarisira kupa vashandisi neinotevera injini dzekutsvaga: Ask.com, Google, Amazon, eBay, Wikipedia, uye isiri-yekutengesa.
Izvo hazvingori chete kune iyo yakawanda mipiro uye kutsigirwa, kubva pane yako chiitiko pawebhu, ese ekutsvaga ekutsvaga iwe aunogadzira uye chigadzirwa icho chaunotenga chinobatsira kubhadhara yedu projekiti.
Netsika kuburitsa pakupera kwaNovember, kazhinji panenge pa 20. Nezvazvakataurwa, mhando yakakosha kupfuura nguva yakatarwa uye nekudaro kudzamara wagutsikana nezvatinazvo, hatisi kuzvisunungura. Isu tinosunungura "kana wagadzirira" uye izvo zvandisingakwanise kutaura zvechokwadi kuti zvichave rini. Ini ndinogona kukuudza, zvakadaro, takagadzirira sei panguva ino.
Yedu Gnome 3 desktop yakagadzirira zvakakwana uye inoshanda zvizere. 10 zviputi zvakaonekwa, asi zvese zvidiki uye zvinogona kugadziriswa, kungave kumberi kana shure kweRC.
Isu takanyora nekuisa MATE padivi peGnome 3 pamuchina wekuyedza unomhanya Ubuntu 11.10 uye ivo vakabudirira mukugadzirisa ese maviri madhesiki. Iye zvino tava kurongedza nekuvaka MATE, tichifambira mberi zvishoma nezvishoma. Hatina chokwadi che100% chokwadi MATE achasvika nenguva yekuzvidemba kwaRC uye tinotarisira kubvisa chero mitsetse yakaoma nazvo kana zvikadaro.
Kutaurirana neinjini dzekutsvaga kuri kuenderera kuitira kuti RC inogona kunge ichishayikwa enjini dzekutsvaga dzinogona kuwedzerwa gare gare mukuburitsa kwakatsiga.
Parizvino tinofanirwa kuve neCR naNovember 11. Zvekare, icho ndicho chinangwa chedu maererano nemisi yakatarwa, asi kana nyaya dzemhando yepamusoro dzikatanga kuitika, zuva iri rinova risingakoshi.
Mhinduro uye maitiro
Isu tanga tichishandisa Gnome 2 kubvira 2006 uye tichifungidzirwa nevazhinji kuve yakanakisa Gnome desktop inowanikwa. NeGnome 3, tinoda kuita chinhu chimwe chete zvakare uye kurega vanhu vasarudze pane chiitiko chavanoda kuwana, kana vachida yakachena desktop Gnome 3, MGSE kana vachida kunamatira neMATE. Tiri kutaura nezve matatu matsva tekinoroji zvigadzirwa, munzira zhinji isu tiri kutanga pamusoro kubva pakutanga. Neichi chinyorwa iwe ikozvino une zano riri nani reLinux Mint 12 ichave, saka zvino kupfuura nakare kose, isu tinoda kunzwa zvaunofunga nezvazvo, kuwana mhinduro yako uye mhinduro.
Ndatenda nekushandisa Linux Mint uye ndinotarisira kuverenga ako makomendi.
Parizvino ndinogona kutsanangura izvi zvese neshoko rimwe chete: Great. Kunyangwe iri chete yekuwedzera kune gnome 3, kubva pane zvauri kuona MGSE inopa chiitiko chakafanana neicho chatinacho nacho gnome 2.
Kunyanya ini ndaitarisira kuona imwe forogo ye gnome 2 ported ku gtk3 kana chimwe chakadai patinotaura nezvenyaya iyi, asi zvandangoona ndakazvifarira. Ini ndinongovimba kuti kunwa hakuwedzeri.
Kana Gnome 3 yapera mune zvinyorwa Kuedzwa kweDebian, Ini ndinogona kushandisa uku kuwedzera pasina dambudziko 😀 Bravo yeiyo Mint timuNdinodaidza kunetseka nezve vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » MGSE iyo desktop nyowani yakatsanangurwa neLinux Mint
Ini ndakanganwa kukuudza kuti menyu yakanaka .. KDE inotambura !!! 😀
Chokwadi ndechekuti ndiri kushamisika, kana zvikanyatsoitika izvo Clem iri kuzivisa Linux Mint ichave budiriro yakazara.
Ndinozviona zvichiuya: Misa kutama kwevashandisi kubva kuUbuntu uye mamwe ma distros kuenda kuLinuxMint. 😀
Zvakanaka, ndinenge ndiri wekutanga. Ini ndanga ndichingo taura pane imwe blog yandinoda zano. kana zvese zvikafamba mushe ndinosiya Ubuntu ndoshandukira kuMint !!!
Ndinofunga uri kutora nguva yakareba kuti uchinje hahaha
Ini ndanga ndichifunga nezvazvo chokwadi
Ndinoifarira! Ndinoda zvikuru! Inotaridzika kuva tsvarakadenga uye yakanaka ... zvedi iyo Mint vagadziri vanoshanda pairi zvakanyanya mazuva ese !!
Pindura kuna nerjamartin
Idzo inhau dzakanaka kwazvo. Ndinovimba inoshanda kuti ugone kuyedza. Kune rimwe divi, ndinotarisira kuti Xfce ichaenderera ichishanda nesimba kuitira kuti iyo inoenderana vhezheni yeLinux Mint ienderere mberi. Ndatenda nechinyorwa.
Ndovimba kudaro. Ndinovimba vakomana veXfce vanowana iyo hang yacho yacho. Zvirinani isu tatoziva kuti vhezheni 4.10 ichave ichiwanikwa muna Ndira gore rinouya, ikozvino tinofanirwa kuona pavanotamira kuGtk3.
David Gomez (@emsLinux) akadaro
Ini ndinoda zano iri, Ubuntu inogona kudzidza zvakawanda kubva kune ava vagadziri ...
Kana zviri zvekuwedzera, ini handina chokwadi chekuti zviri nyore sei, sezvo GNOME Shell ichiri yakasvibirira kana zvasvika pakuwedzera, uye vachiri nematambudziko akawanda.
Pindura kuna David Gómez (@emsLinux)
Chokwadi, Ubuntu yaizofanira kudzidza zvakawanda kubva kuLinux Mint. Ichokwadi kuti Gnom-Shell yakati rebei kunyangwe iine zviwedzero, asi kana Clem akati inoshanda pasina matambudziko, zvinoshanda .. Zvakashata hazvigone kuyedzwa parizvino
Ndinovimba gnome 2 icharamba ichiwanikwa pane Debian yakagadzikana kwenguva yakareba 🙂
Ini ndatoedza uye kuyedza kugovera. Nokuti ikozvino ndinoona Xfce seimwe nzira inoshanda kune gnome 2, asi ichiri kuda kuvandudzwa uye handizive kana timu yaro yevagadziri inogamuchira rutsigiro rwainoda kubva munharaunda.
Ini handifunge kuti vachachinja chero chinhu muDebian Yakagadzika imwe kunze kwekuchengetedza mapakeji. Saka iwe uchave uine Gnome2 ipapo kwenguva yakareba 😀
Nei generic linux logo ichionekwa pasi peavatar yangu kana ndikashandisa 64b Debian kusvina?
Heano mamwe matipi ekuti ungagadzirise sei, chenjera, iwe unofanirwa kuchinjisa kune iyo browser yaunoshandisa. https://blog.desdelinux.net/tips-como-cambiar-el-user-agent-de-firefox/
Ndine dambudziko rakafanana. kuyedza !!!
hehe, zvakashanda !!!! 🙂
Iko kukanganisa kuripo neFirefox, iyo isingakwanise kutaura kuti ndiani system irikushandisa uye unofanirwa isai manyore. Asi zvinowanzoitika naDebian uye mamwe ma distros. 😀
Usati waimonera, iwe unogona kufunga zvishoma, kuti kunyangwe muWinbuntu haishande
Enda unonwa for c *** .. 😛
Louis Giardino akadaro
Nhau dzinoshamisa, zviri kupfuura zvandaitarisira, sezvo ndanga ndichinetseka kuti chii chingaitika sezvo mindi ndiyo distro yandinofarira uye iyo yandinokurudzira kushamwari dzangu uye kuifarira, yakanaka kwavari zvakanaka kwatiri tese ...
Pindura kuna Luis Giardino
«Kunyanya ini ndaitarisira kuona imwe forogo yeGnome 2 yakatumirwa kuGtk3 kana chimwe chinhu chakadai patakataura nezvenyaya iyi, asi izvo zvandakangoona ndakazvifarira. "Ndinongovimba kuti mashandisiro acho haana kunyanyisa."
Ndingadai ndakaifarira futi, asi gnome 2 forogo inotakurirwa gtk3 yaizotora nguva yakareba kupfuura kuwedzera kweiyo shell, asi ndinoiona ichifadza zvinoitwa nevanhu veMATE.
Chokwadi, zvinotora nguva yakareba, asi pano neapo chirongwa cheMATE chinofanira kuita chimwe chinhu nezvazvo. Kubva pane zvandanga ndichiongorora, MATE yakatora iyo GNOME 2 mapakeji ndokuvapa mazita, kureva kuti, ichiri Gnome 2. Nekufamba kwenguva iwo mapakeji achange asisashandiswe, unenge usina mararaibhurari anoenderana uye akanyanya kuvandudzwa mafomu haazokwanisi mhanya pavari.
Pamwe havafanirwe kutakura MATE kuenda kuGtk3, ini ndinofunga nzira yakangwara ndeyekutora Gnome-Kudonha uye kuishongedza nezvinhu zvaisina izvo izvozvi.
… Uye chii chinofanira. Linux Mint chinyorwa?
Pindura kuna coolito
Ndiyo inoenderana neUbuntu 11.10
Kubva kuvashandisi veUbuntu tinogona kuyedza Linux Mint MGSE shell
Kwayaka: WEB UPD8
Hazvikuvadze kuedza dzimwe nzira dzekuona kuti vari kuita sei uye woenzanisa kuti ndeipi inonyatsoenderana nezvatinoda nezvatinoda. Parizvino ndinoenderera mberi nekubatana uye neGlobal Menyu. sesarudzo yechipiri Gnome Shell
Pindura kune sangener
Iyo tafura nyowani inoshamisa, rakanaka kwazvo basa kubva kune iyo mint timu, tichaiona riini muLMDE ???
Kutanga ini ndaizofanira kupinda Gnome Shell kuLMDE
Ndizvozvo…. Vakagadzira zano rakanaka: kuwedzera. Nekudaro, basa rinochengetwa uye mhedzisiro inotarisirwa inowanikwa…. uye kana usingaifarire, ita kuti isashanda uye haufanire kunge uchidzorera nharaunda yese Yakakura uye inonakidza. Ini ndiri anotevera mushandisi weLinux Mint, iyo nhasi yatodarika Ubuntu. Ini ndaida kutaura sei izvi.
Kukahadzika kwangu chete kwaizove kana iko kuwedzera kuri modular, ndiko kuti… kuti iwe ugone kumisikidza zvikamu zvekuwedzera zvaunoda uye zvimwe zvacho kwete…. Semuenzaniso, shandisa hwindo sarudza uye riise pamusoro semuenzaniso…. uye kudzima yekutanga menyu…. kana kuisa zviziviso uye nzvimbo yekuzivisa uko gnome shell, pazasi. Ini ndinofunga ichave iri nyaya yenguva.
Ini ndinofunga zvinofanirwa kunge zvakadaro. MGSE inoita kwandiri kuti haisi yekuwedzera imwe chete, asi boka ravo raunogona kudzima paunoda iwe
Ehe hongu, kune matatu ekuwedzera…. uye vanoshanda nemazvo. Ini ndinofunga menyu yacho yakati rebei neGnome 3 desktop… saka ndinoidzima. Asi kana ini ndikawana iyo yekushandira uye yewindows sarudza inobatsira kwazvo, vanoshanda seGnome 2, vachimhanyisa basa rangu. Uye hazvipindirane kana kupinda munzira yenzvimbo yekuzivisa, yakaderera, iyo yave padiki padiki… .. Yakakura. Zvese zvirikushaikwa izvozvi ndezvekuti zvese izvi zvioneke mu "Debian Edition", nekuti Mint ichiri kubva paUbuntu ... ichimisa iyo yakanaka asiwo yakaipa yeiyo ....
Ini ndinofunga iyo menyu iri yakati wandei neiyo Gnome 3 desktop
Kwete zvangu, nekuti zvinonetesa kuve tichitsvaga chikumbiro kana tisina kuchiwedzera kuDock. Ndinofunga menyu yakabudirira kwazvo. Icho chokwadi chekuti uku kuwedzera kuri muLMDE kunoenderana chete neGnome 3 ichingopinda Debian Kwayedza.
panonzi "pasi" ndanga ndichida kuti "pasi" ... .. uye panonzi "eredado" "nhaka" ... .. Pano tinoda mukana wekugadzirisa zvakanyorwa
Hongu, asi kukanganisa kukuru kwegnome 3 nesinamoni, iyo inenge yakafanana, ndeyekuti inoparadzanisa nevanotyairi veNVIDIA, X server inofa uye sangano rakavharwa.
Saka kana iwe uchida kushandisa vatyairi veNVIDIA, usashandise sinamoni kana gnome 3 zvachose kusvikira wagadzirisa iro dambudziko.
Pindura kuna Eugenio
Chinja chimiro cheGrub neOxygen Grub2 theme
Faience Icon Dingindira: Faenza Icons yeGNOME 3